Madaxii hore ee IMF oo laga siidaayay Xabsi guri uu ku jiray Magaalada New York. – SBC
Madaxii hore ee IMF oo laga siidaayay Xabsi guri uu ku jiray Magaalada New York.
Madaxii hore ee Hay ada lacagta aduunka IMF Dominique Strauss-Kahn ayaa Maxkamad ku taala dalkaasi waxaa ay u ogolaatay In laga siidaayo xabsi guriga uu ku jiray ee Magaalada New York.
Garsoorka Maxkamada fasaxday Dominque ayaa sheegtay in xabsi guriga laga siidaayay aanay ahayn micnaheeda gabi ahaan in la fasaxay ama la laalay Kiiskiisa,laakiinse waxaa uu si la socod leh usii joogi doonaa Dalka Maraykanka tan iyo inta eedeymaha loosoo jeedinayo ay baaritaanadoodu dhamaanayaan.
Dominique Strauss-Kahn ayaa markii ay Maxkamadu ogolaatay in xabsi guriga laga siidaayo waxaa isaga oo dhoola cadaynaya uu raacay gaarigiisa,iyadoona uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu dib xoriyadiisa u helo.
Kiiska Dominique Strauss-Kahn oo aanan weli lasoo afjarin ayaa qaar kamid ah warbaahinta dalka Maraykanku ay sheegeen in uu u muuqda mid soo afjarmaya.
14-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii Dominique Strauss-Kahn lagu helay dambi ah in uu doonayay in uu kufsado gabar Jaariyad ah oo ka shaqaynaysay Hotel uu ka daganaa Magaalada New york ee dalkaasi Maraykanka.
62 sano jirkan u dhashay Dalka Faransiiska waxaa uu mudo Madax ka ahaa Hay ada lacagta aduunka ee IMF,waxaana dhowaan lagu waday in uu isu soo taago doorashada madaxtinimada Dalka Faransiiska.